RASMI: Real Madrid oo shaacisay dhaawaca mid ka mid ah xiddigaheeda & Kulammada uu seegi doono oo la sii ogaaday – Gool FM
(Madrid) 27 Nof 2020. Kooxda Real Madrid ayaa maanta oo Jimco ah ku shaacisay website-keeda rasmiga ah dhaawaca daafaca reer Spain ee Dani Carvajal.
Dhaawacan soo gaaray Dani Carvajal ayaa ka dhigan inuu seegayo kulanka ay habeen dame ku wada ciyaari doonaan kooxaha Real Madrid iyo Deportivo Alaves horyaalka La Liga ee dalka Spain.
Real Madrid ayaa warbixin rasmi ah oo ay soo saartay waxay ku sheegtay in Dani Carvajal uu soo gaaray dhaawac dhanka muruqa hoose bowdada ee lugtiisa midig ah.
Dhinaca kale wargeyska “AS” ee dalka Spain ayaa wuxuu xaqiijiyay in dhaawacyada nuucaan ah uu u baahan yahay 14 maalmood si uu u soo kabsado.
Sida ay wararku tilmaamayaan Dani Carvajal wuxuu seegi doono 4 kulan oo Real Madrid ah oo isgu jira horyaalka La Liga iyo tartanka Champions League, waxaana qeyb ka ah kulanka habeen dambe ee Deportivo Alaves.
Daafaca reer Spain ayaa sidoo kale seegi doona kulamada Shakhtar iyo Borussia Mönchengladbach ee ah labada kulan ugu dambeeya wareega group-yada ee tartanka Champions League, sidoo kale wuxuu maqnaan doonaa kulanka Sevilla ee horyaalka Spain.
Dani Carvajal ayaa la filayaa inuu ku soo laaban doono safka kooxda Real Madrid kulanka Madrid Derby oo ay Atlético Madrid oo ay ku wajihi doonaan maalin sabti ah 9-ka December horyaalka Spain.